“Mr.Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲ​ကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ​ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံ​နေရတဲ့ မင်းသမီး Shin Hye Sun | News Bar Myanmar
“Mr.Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲ​ကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ​ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံ​နေရတဲ့ မင်းသမီး Shin Hye Sun
“Joseon Exorcist” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ​တွေရဲ့ ​ဝေဖန်​ပြောဆိုမှု​တွေ မြင့်တက်​နေချိန်မှာပဲ မင်းသမီး Shin Hye Sun ဟာလည်း ပြည်သူလူထု​ရဲ့ မုန်းတီးခြင်းကို စတင်ခံစား​နေရပါတယ်။ မင်းသမီး Shin Hye Sun ဟာ tvN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ဂျိုဆွန်း​ခေတ် သမိုင်း​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Mr. Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုဇာတ်လမ်းတွဲကို ထုတ်လွှင့်ပြီးတာ တစ်လ​ကျော်ကြာပြီဆို​ပေမဲ့ မင်းသမီးဟာ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာ​ကြောင့် အခုမှ တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ​ဝေဖန်​ပြောဆိုခြင်းကို ခံ​နေရပါတယ်။ “Mr. Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ စတင်ထုတ်လွှင့်စဉ်တုန်းကလည်း တောင်ကိုရီးယားရဲ့ သမိုင်း​ကြောင်းကို ​ပျက်ရယ်ပြုထားတယ်လို့ လူ​တွေက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး ​ဝေဖန်တာကို အကြီးအကျယ် ခံခဲ့ရပါတယ်။
ထို့​ကြောင့် ရိုက်ကူး​ရေးအဖွဲ့က သူတို့ရဲ့ အမှားကို ဝန်ခံပြီး ​တောင်းပန်စာထုတ်ခဲ့တာ​ကြောင့် ​ဝေဖန်သူ​တွေဟာ မ​ကျေမနပ်နဲ့ပဲ ဒီကိစ္စကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲကို​တော့ အပိုင်း​တွေပါ ထပ်တိုးပြီး ဇာတ်သိမ်းအထိ ​အောင်မြင်စွာ ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ထုတ်လွှင့်ပြီးတာ တစ်လ​ကျော်ကြာပြီဖြစ်​ပေမဲ့ ယခု ​ဝေဖန်ခံ​နေရတဲ့ “Joseon Exorcist” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက သမိုင်း​ကြောင်းအလွဲ​တွေ​နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး “Mr.Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲကပါ လူ​​တွေရဲ့ အာရုံထဲ ပြန်​ရောက်လာပါ​တော့တယ်။
ဒါ့အပြင် မင်းသမီး Shin Hye Sun က “Mr.Queen” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမ​ပြောခဲ့တဲ့ စကားက လူ​တွေရဲ့ ပစ်မှတ်အသစ်ဖြစ်လာပါ​တော့တယ်။ သူမဟာ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ဒီဇာတ်လမ်းကို မရိုက်ပဲ ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် သူမ ​နောင်တရလိမ့်မယ်လို့ ​ပြောခဲ့တာပါ။
“Joseon Exorcist” ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်​ဆောင်​တွေနည်းတူပဲ “Mr.Queen” ဇာတ်လမ်းဟာ ​တောင်ကိုရီးယားရဲ့ သမိုင်းကို ဖျက်စီး​နေတာကို သိရက်နဲ့ ဒီကိစ္စကို ဘာမှမ​ပြောခဲ့တာ​ကြောင့် လူ​တွေက စိတ်ပျက်​နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးဟာ အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို ​ရောင်းစားပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတယ်လို့ လူထုရဲ့ ပြင်းထန်စွာ ​ဝေဖန်ခြင်းကို ခံ​နေရပါတယ်။
ထို့အပြင် မင်းသမီးဟာ “Mr.Queen” ထဲက ဇာတ်​ကောင်ပုံစံနဲ့ ကြက်​ကြော် ​ကြော်ငြာတစ်ခုကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာ​ကြောင့် ပိုပြီး အပြစ်တင်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ အခုဆိုရင် မင်းသမီး Shin Hye Sun ရဲ့ အနုပညာအလုပ်​တွေကိုပါ ထိခိုက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
​ဝေဖန်သူ​​တွေဟာ လက်ရှိမှာ မင်းသမီး Shin Hye Sun နဲ့ ​​​ကြော်ငြာဖို့ လုပ်ထားတဲ့ “We Must M” ဆိုတဲ့ mask brand ကိုလည်း သပိတ်​မှောက်ဖို့ လုပ်​နေကြပြီး Shin Hye Sun ကို ​မော်ဒယ်အဖြစ် မသုံးဖို့ ​တောင်းဆို​နေကြပါတယ်။
Next ARMY တို့ကော မထင်မှတ်ထားတဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အငိုအသန်ဆုံးသူ… »
Previous « ဧပြီလမှာ တစ်ကိုယ်​တော် ပွဲဦးထွက်​တော့မယ့် Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Wendy